သင်၏မအောင်မြင်သောအကြောင်းအရာစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း Martech Zone
ငါတို့မကြာသေးခင်ကငါတို့မေးခဲ့ကြပြီးအချို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသင့်ရဲ့ဖြစ်စေမဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊။ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တွေ့မြင်နေရသောပြproblemနာမှာကုမ္ပဏီများသည်ရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပစ်ရန်သာအာရုံစိုက်သည်။
ရူးသွပ်မှု၏အဓိပ္ပါယ်သည်ထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမျှော်လင့်နေခြင်းမဟုတ်ပေလော။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုသတ်မှတ်ပါကသင်၌အခက်အခဲကြုံတွေ့ရပြီးအိမ်သာထဲသို့အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ မင်း နိုင် ရလဒ်အချို့ရရှိပါ။ သို့သော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်များစွာရရန်သင့်အားမောင်းနှင်ရန်အခွင့်အလမ်းသည်အနည်းငယ်မျှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။
ဒီကနေ infographic BrightEdgeတစ်ဦး SEO ပလက်ဖောင်း, လူမှုရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးအားထုတ်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထိရောက်သောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာဘယ်လိုအတူတကွအာရုံစိုက် သင်၏ခြုံငုံရှာဖွေမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ပါ.
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အားပိုမိုသိရှိလာစေရန်နှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် smart SEO နည်းစနစ်များဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့များကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ဤအရည်အသွေးမြင့်သောအကြောင်းအရာများသည်သင်၏အဆင့်မြင့်သောအခွင့်အာဏာကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အဆင့်မြင့်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Sudhir ရှားမား
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတွင်၊ အလားအလာသည်အလတ်စားတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မျှဝေထားသောသင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေသူတစ် ဦး ဦး ထံရောက်ရှိနိုင်သည်။ အဲဒါကသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ site ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးသင့်အီးမေးလ်သတင်းလွှာအတွက်သူတို့က sign up လုပ်ပါ။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူတို့သည်အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အကြောင်းအရာများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာသည့်မျှတသောနည်းဗျူဟာ အကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာ.
Tags: ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရေးရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းsearch engine ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်seoလူမှုရေးမြှင့်တင်ရေး
Skype မှာ Podcast အင်တာဗျူးတခုကိုဘယ်လိုရယူမလဲ